Readdle inochinjisa zvese zvinoshandiswa kune izvo zvitsva zveiyo iPhone X | IPhone nhau
Readdle inochinjisa zvese zvayinoita kune izvo zvitsva zveiyo iPhone X
Vashandisi vanga vaine yakakosha iPhone X kubvira nezuro vanofara nekutenga kwako uye yekuva nechimurenga chinouraya. Asi ivo vari zvakare kuona iyo mashoma mashandisiro akachinjika kuchimiro chitsva chechigadzirwa, kunyanya musoro wenyaya une chekuita nechinyorwa chiri pamusoro.
Readdle ikambani inosimudzira iyo ine akati wandei ekugadzirwa kunyorera mukati meApp Store. Kuburikidza neshoko pane yake yepamutemo blog, iye anozivisa izvozvo yakagadzirisa manyorerwo manomwe kune dhizaini nyowani yeiyo iPhone X kuitira kuti ruzivo rwevashandisi ive yakanakisa nedhizaoni yavo nyowani.
PDF Nyanzvi, Zvinyorwa, Scanner Pro… Readdle inoita basa rayo neiyo iPhone X
Uyu anovandudza agara ari kambani inovandudza maererano nemashandiro. Rangarira kuti iyi kambani yakatanga iyo Dhonza uye Kudonhedza chimiro kunyangwe kuvhurwa kweIOS 11, chimwe chinhu chakashamisa ruzhinji rwevashandisi vakawana zviri nyore kubata zvinyorwa zvavo pakati pekushandisa.
Akagara achishandisa zvakanakisa yega yega yeApple software uye zvigadzirwa zvehardware uye ne iPhone X kuvhura zvaisazove zvishoma. Iyo 7 mafomu avanayo muApp Store Iwo akagadziridzwa achichinjira kune ese matsva maficha efoni ayo anoyeuchidza yegumi yegumi yeiyo iPhone.
Pano […], tinoda chinetso, saka takaisa nguva yedu neunyanzvi mumavhiki mashoma apfuura kuti muve nechokwadi chekuti mune ruzivo rwakanyanya kugona nechinhu chako chitsva.
Nhau dzakanangana nembiru mbiri. Chekutanga, kuchinjika kwemaapps kune iyo nyowani dhizaini Zvekushandisa. Pane rimwe divi, Face ID inotsiva Kubata ID uye nekudaro inosanganiswa mune ese Readdle app ekuchengetedza maturusi. Heano akanangana neakananga kuApp Store ezvishandiso zvakagadziriswa.
Spark Mail - Readdle Tsambavakasununguka
PDF Nyanzvi: gadzira uye gadzirisa PDFvakasununguka
Makarenda 5 naReaddle29,99 €
Readdle Printer Pro6,99 €
Readdle PDF Shanduri6,99 €
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Readdle inochinjisa zvese zvayinoita kune izvo zvitsva zveiyo iPhone X
Mamwe makambani anofanirwa kugadzirisa nekukurumidza sezvazvinogona.